Xarun ay leedahay Wasaaradda Maaliyadda Somaliland oo la weeraray | KEYDMEDIA ONLINE
Xarun ay leedahay Wasaaradda Maaliyadda Somaliland oo la weeraray
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhaawacmay weerar Bambaano ah oo xalay lagu qaaday xarun ay Wasaaradda Maaliyadda Somaliland ku leedahay magaalada Boorama ee gobolka Awdal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii weerar Bambaano ah ku qaaday xarun ay Wasaaradda Maaliyadda Somaliland ku leedahay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama.
Weerarkaan ayaa bur bur xoogan gaarsiiyay dhismaha xarunta, waxaana sidoo kale lagu waramayaa in uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda Somaliland oo goobta ku sugnaa.
“Xalay saqdii Abaare 11:50 habeenimo waxa aan maqalnay dhawaq xoog wayn iyo quruurux jiingada guriga noogu soo daatay” ayuu yiri goob jooge ka tirsan dadka degaanka oo saxaafada la hadlay.
Saraakiisha amaanka gobolka Awdal ayaa la sheegayaa in ay isla xalay baaritaan ka bilaabeen aagga xarunta, balse ilaa iyo hadda majirto cid loo soo qabtay weerarka xalay lagu qaaday dhismaha Wasaaradda Maaliyadda.
Magaalada Boorama ee gobolka Awdal oo aan dhawaanahaan looga baran falalka nuucaan oo kale ah ayaa waxaa hadda ka jiro dhaq dhaqaaqyo lagu diidanyahay maamulka Somaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyene Muuse Biixi Cabdi.